मृत बच्चा बोकेर १७ दिनसम्म भौँतारिएको ह्वेल ! – Everest Dainik – News from Nepal
मृत बच्चा बोकेर १७ दिनसम्म भौँतारिएको ह्वेल !
अमेरिका, साउन २८ । एउटा किलर ह्वेलले आफ्नो मृत नवजात बच्चा लिएर समुद्रमा १७ दिनसम्म भौँतारिएको र त्यसक्रममा उसले १६ सय किलोमिटरको यात्रा तय गरेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।
क्यानडाको भ्यान्कुवर टापु पारीको हारो क्षेत्रमा त्यो किलर ह्वेलले आफ्ना साथीहरूसँगै मिलेर सालमन माछाको ठूलो समूहलाई तीव्र गतिमा लखेटेको ह्वेल अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले शनिवार जारी गरेको एक विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘उसको शोकको यात्रा अब सकिएको छ र उसको स्वभाव निकै चञ्चल भइरहेको छ।’
किलर (अर्थात् ज्यानमारा) ह्वेल डल्फिन वर्गको सबैभन्दा ठूलो प्रजाति हो। निकै तेज गतिमा चल्ने यो जातिको ह्वेलले समुद्रमा निकै चलाखीपूर्वक आफ्नो आहारा सिकार गर्दछ। यो पृथ्वीको सबैजसो समुद्रमा पाइन्छ।
किलर ह्वेलले आफ्नो मृत बच्चालाई एक हप्तासम्म आफूसँगै लिएर भौँतारिने गर्दछन् तर वैज्ञानिक भन्छन् भ्यान्कुवर टापु पारीको यो किलर ह्वेल आमाले ‘नयाँ कीर्तिमान राखेको छ’।
जे३५ (J35) नाम दिइएकी यो आमा ह्वेलले गत पाँचदिनदेखि विश्वको ध्यान आफूतिर खिचिरहेको थियो। ह्वेल अनुसन्धान केन्द्रले विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘समुद्री तटबाट लिइएका टेलिफोटो डिजिटल तस्बिरहरूमा यो आमाको शारीरिक अवस्था निकै राम्रो अवस्थामा रहेको देखिएको छ।’
’मृत बच्चाको शव सम्भवत अमेरिका र क्यानडाबीच रहेको सालिस सागरमा समुद्रको पिँधमा झरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यसलाई भेट्टाएर नेक्रोप्सी (जनावरहरूको लासजाँच) गर्ने मौका पाउन सक्छन्,’ विज्ञप्तिीमा उल्लेख छ ।
आफ्तो मृत बच्चालाई बोकेर अघि बढिरहेको त्यो ह्वेल जुलाई २४ मा पहिलो पटक देखिएको थियो। नवजात बच्चा त्यही दिन मरेको हुन सक्ने ठानिएको छ। मर्नुको कारण भने प्रष्ट छैन।
क्यानडा र अमेरिका दुवैले किलर ह्वेललाई संकटापन्न समुद्री जीवको सूचीमा राखेका छन्। किलर ह्वेलले चिनुक जातको सालमन माछा खाने गर्दछ। तर चिनुक सालमन माछाको संख्या नाटकीय रूपमा घटिरहेको छ। बीबीसी
ट्याग्स: Killer Whole